NOOCYADA UGU CAANSAN EE BEGONIAS, SHARAXAAD IYO SAWIRRO DHIRTA - DHIRTA GUDAHA
Begonia waa mid ka mid ah dhirta ugu caansan uguna quruxda badan oo ku yaal xaafadaha daaqadaha gudaha, beeraha iyo beeraha magaalada. Warshadani waxay leedahay in ka badan 900 nooc oo buuxa oo noocyo ah 2000. Ubaxa waxaa markii hore ku sharraxay Michel Begon, kaas oo helay muuqaal qurxoon, ubax aad u qurux badan oo ku yaala Antilles. Cunnayaasha dambe ayaa ku qeexay nooca orchid. Sida loo helo si habboon oo loo daryeelo noocyada ugu caansan ee begonias, waxaan ka wada hadli doonaa maqaalkan.
Si tartiib ah, waxaad ka heli kartaa noocyada kala duwan ee begonias on daaqadaha daaqada ubaxist. Fikrad gaar ah waa Royal Begonia, oo lagu go'doomay noocyada kala duwan, maadaama ay leedahay tirada ugu badan ee noocyada isdhexgalka ee begonia.
Beelaha ugu caansan ee noocyada noocan ahi waa "Begonia Rex"Tani waa dhir isdaba-joog ah oo dhir ah oo qaab-dhismeed leh oo leh dhul-beereed weyn. Qalabka dhirta gaaban waa mid gaaban, caleemuhu waa qalbi qaabeeya midab kala duwan, saxanka dusha sare ayaa lagu daboolaa lafdhabarta, wuxuuna u eg yahay filim dhagan.
Ma taqaanaa? Bilowga Royal ayaa markii ugu horreysay laga ogaaday 1856 London oo ku taal xaraashka isboortiga. Wuxuu bilaabay in uu abuuro noocyo cusub oo begonias ah oo bilaabay 1859 (3 nooc), ka dib markii caanahaas "waxay qaadeen curonia horumarinta."
Mid ka mid ah begonias hybrid ugu dambeeyey by bred growers waa Begonia Griffin - warshad weyn oo kori karta ilaa 41 cm oo dherer ah, oo leh caleemo dhajisan oo ballaaran. Tani ma aha nooca isku dhafka ah ee galmada. Aan u fiirsano si faahfaahin ah mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Begonia "Escargot" - warshad cufan oo ballaadhan, oo gaadhaysa ilaa 30 cm Caleemaha noocyadaas waxaa lagu sameeyaa asliga ah, taas oo la mid ah qolofka dabayl. Caleemo cagaaran leh jilbaha lacagta. Geedkaas wuxuu bilaabmaa inuu bilaabo xagaaga hore ee cadaan.
"Dollar hoos"- mid ka mid ah noocyada ugu gaaban ee geedka-geedka ah ee ubaxa ah, ubaxkan qaangaadhka ah ee qoyaanku wuxuu ku yaallaa dherer leh dhererkeedu yahay 8-10 cm Caleemaha waa mid aad u qurux badan: midab madow oo leh midab khafiif ah oo u dhow xadka madow.
"Yar yari"- inkastoo magaciisu yahay 30 cm oo dhererkiisu yahay 40 cm, caleemaha geedkaas waa mid yar, satin-madow, oo casaan leh ciriiri cagaaran oo cagaaran ah Xudduudda caleenta burgundy midab madow, dhir dareen ah.
"Farxad farxad leh"- mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee beerta ubaxa begonias Gobollada koraa ilaa 35 cm dheer Caleemaha waa yar yar, asymmetrical, ukunta-qaabeeya, geeska caleen yar yar yar yahay.
Dhibcaha caleenta cagaarka ah waa mugdi, oo ah midabka maroon-madow, jilicsan oo udhow gees u dhow, iyo lacag-emerald on gees ah. Xuduudda caleen waa midab-bunoon. Blooms weyn, ubax casaan on peduncles yar.
Mid kale oo loo yaqaan 'hybrid hybrid -' "Benitochiba"Natiijada" "Filigree" iyo "Luxurians" .Qalabkan waxaa loo yaqaan "Begonia Rex Benichoma", si kastaba ha ahaatee, tani maaha run. Inta badan waxaa la barbardhigaa dhammaadka xagaaga ubaxyo casaan ah.
HybridIskutallaabta birta"- maaha birta, maadaama aad ka filan karto magaca, ubaxu waa qalbi-qaabeeya, cagaaran, cagaaran oo leh iskutallaab bunni ah oo ku yaal bartamaha.
Fikrad aad u caan ah begonias, inta badan laga helo dalka, waa Begonia Borschavikolistnaya. Noocyadaasi waa mid ballaadhan, oo leh fejis, xayawaan gurguurto oo gaadhaya 40-50 cm.
Caleemaha noocyada of begonias yihiin ballaaran, ilaa 30 cm dherer. Midabaynta waxay noqon kartaa mid kala duwan: laga bilaabo cagaaran dhalaalaya ilaa cagaar iftiin ah. Qeybta hoose ee xaashida waa cagaar iftiin ama casaan-bunni ah, daboolay "hoos".
Burushka ubaxa waa weyn - 40-50 cm; casaan ubax ama caddaan. Ubaxku wuxuu bilaabmaa dhamaadka bisha Febraayo wuxuuna soconayaa ilaa Abriil. Gaar ahaan firfircoonaanta ubaxa waxay horumarisaa guga iyo xagaaga.
Noocadani waxay leedahay qaabab kala duwan.
Borschworm begonia caleemaha madow (Begonia heracleifolia var, nigricans), taas oo ka duwan tahay Begonia Borschavikolistnoy - "hooyo" of this hybrid, ubax this waa gebi ahaan qurxinta. The stem ee ubaxa waa fareesho, gurguurta, sida foomka asalka ah.
Caleemaha waaweyn waa palmate-kala gooni ah, 25 cm dhexroor, diyaarin on petioles gaaban, waxoogaa yar pubescent ee geeska. On top of caleemaha waxaa la rinjiyeeyay cagaaran iftiin leh kala guurka ah ee brown mugdi ah, on gudaha caleen wuxuu leeyahay midab cagaaran iftiin. Peduncle si aad u sarreeya (40-50 cm), ubax waaweyn (2.5 cm) - casaan casri ah.
Begonia Yellow - waa warshad qaab dhismeed nus ah, 40-50 cm sare. caleemaha "jiifa". Petioles waa qaali. Caleemaha waa weyn iyo razloie: 17-20 cm dhererka iyo qiyaastii 15 cm width. Dhinacyada caleemaha caleemaha waxay leeyihiin ilko yaryar, caarada ayaa lagu tilmaamay.
Ubax ayaa lagu soo ururiyaa inflorescences, midabkiisu waa huruud hurdi. Noocyada noocan ah waxaa badanaa loo isticmaalaa noocyada kala duwan ee bacriminta ee begonias guriga ama dhirta taranta.
Borschavikolistnaya begon geedka kale ee caan ah waa gabar cusub. Noocaankan waxaa matala warshad qashin ah oo dhulka hoostiisa ah. Dhicid yar yar ayaa la gaabiyaa.
Caleemaha waxaa lagu soo koobay, wax yar ka dibna waa la jeexay. In size, waxay yihiin kuwo aad u ballaaran, gaarey 12-15 cm dherer iyo 9-10 width. Dhanka dibedda waxay yihiin cagaar madow leh oo dhalaalaya oo dhalaalaya, gudaha iyo dibadda guduudana waa guduud.
Warshadku wuxuu ka bilawdaa Diseembar wuxuuna dhamaanayaa Juun. Ubaxku waa yar yahay, caddaan leh jilbis casaan. Badanaa noocyada hoose waxay ka tirsan yihiin begonias gudaha-ubaxa.
Begonia waa mid cajiib ah - mid ka mid ah noocyada dhirta ee ugu caamsan. Si ka duwan sida ay "walaalaha ah", noocan oo kale ee curonia waa qumman, dheer (1.2 mitir celcelis ahaan), jeexjeexay, iyo caleemaha "qaawan."
Caleemaha waa qaabka wadnaha-qaabka ah. Qaybta gudaha iyo dibedda ee xaashida waxay ku kala duwan yihiin midabka midabka midabka: dusha sare ee xaashidu waa caga badan oo cagaaran, halka hoose hoos u cagaaran. Beelaha isku duuban ku dhowaad dhammaan wareegyada sanadka, marka laga reebo dayrta. Ubaxa wuxuu noqon karaa casaan ama caddaan.
Xannaanaynta Limgon (ilmo dhalasho) - warshad qaab ah geedo. Caleemaha of this hybrid ayaa hoos u deldelaya, 30-50 cm dheer.
Leaves waa qalbi-qaabeeya saldhigga. Laga soo bilaabo dhexe ilaa geeska - ukunta-qaabeeya. Qeybta qoraxda. Cabbirka caleen waa 8-12 cm oo dheer iyo 5 sm oo ballaaran. Caleemaha waxaa lagu dhajiyaa cawska midabka cagaaran. Caleen waa cagaar iftiin ah, wuxuu bixiyaa tinge huruud ah.
Geedka ubaxyada xagaaga ee xagaaga waxeeyna qaadan kartaa hoosaad kasta oo ka yimaada guduudka casaanka ah ee geedka.
Begonia Bovera - ubaxa guriga ubaxyada leh caleemo cagaaran oo cagaar ah oo qurux badan, lalabo-u qaybsan. Farta kasta waxay leedahay meel cagaaran oo iftiin leh. Caleemuhu waa kuwo yaryar, oo hooseeya, barxadda barafka. Warshadu waxay ku jirtaa qaab yar oo baadiyaha ah, waxay gaartaa dherer 10 cm.
Noocani wuxuu loola jeedaa kuwa begonias kuwaas oo loo yaqaan ubax. Blooms guga leh ubaxyo casaan cirro leh ama midab cad. Warshadu maaha mid aad u muuqata oo dareensan raaxo wanaagsan guriga, si sahal ah ayuu u soo saari karaa. Hoos u dhig heerkulka qolka, marar badan waxaad u baahan tahay inaad u cabto noocaan ah curonia.
Warshadu waa wax aan qabyo ahayn oo daryeel ah waxayna ubaahan tahay beerista kaliya hal jeer sanadkii (doorbidayaa isku dar ah peat iyo dhulka). Iftiimintu way ka fiican tahay in la doorto maaha mid aad u dhalaalaya, sababtoo ah caleemaha aad u dhalaalaya ayaa lumin kara midab.
Noocyo aad u qurux badan oo begonias ah, oo sidoo kale loo yaqaan "malaa'igta malaa'igta"Caleemaha waa ciriiri, cagaaran dhalaalaya, dhirta ubaxyada leh ubaxyo yar yar oo casaan leh." Cuntada kala duwan ee waqtiyada kala duwan, waxay ku xiran tahay geedka, laakiin inta badan iyo ugu firfircoon - xilliga jiilaalka ama horraanta gu'ga.
Noocaankan wuxuu leeyahay qaybo badan, oo ku kala duwanaan kara dhererka (begonias-ba'an) - aan ka badnayn 30 cm, halka jirridda koraan 90 cm).
Warshadani waa mid aan qabyo ahayn, si fiican u dulqaadaneysa heerkulka qolka caadiga ah ee aadanaha, waxay noqon kartaa iftiin dhalaalaya, laakiin maaha shidaal toos ah. Uma baahnid nidaam waraabineed oo gaar ah, waa ku filan inaad biyo u cabto markaad aragto lakabka sare ee dhulka.
Ku beddelidda dherer weyn ayaa ku filan sanadkiiba mar - guga. Waxaa lagu faafin karaa by dhirta (gooyn) iyo hababka abuur.
Beelaha ugu caamsan:
"Xumbo"- Blooms ku dhowaad sanadka oo dhan. Ubax waa casaan-casaan.
"Raadinta muraayadda"- waxay ku koraan si aad u ballaaran, min 30 illaa 90 cm oo dherer ah, ubaxyo casaan ah, dibedda, caleemaha waa silvery, oo xididdada midabka leh ee cagaarka ah-cagaaran.
"Rackie Kracklin"- waxaad ku aragtaa casaan mugdi ah, oo leh caleemo casaan leh.
"Sophie guusheeda"- caleemo cagaaran oo caleemo cad leh.
"Orococo"- laga yaabee mid ka mid ah noocyada isbeddelka ugu quruxda badan ee Coral Begonia. Caleemaha waa cagaar iyo dahab ah, qaab-qaabeeya.
Noocani waa booqde joogta ah ee daaqadaha guryaha ee guryaha. Warshadu waa yaqaan dhammaan dadka yaryar. Baaxaddiisu waa mid aad u ballaaran - illaa iyo 50 cm. Dhaqdhaqaaqa ubaxa waa mid toosan oo khafiif ah, daboolay "hoos". Caleemuhu waa cagaar iyo dibedda - oo ku dhex jira gudaha. On caleemaha waxaa jira "daboolaya" ee timaha yar yar.
Ma taqaanaa? Midabka waraaqdu way kala duwanaan karaan waxayna ku xiran tahay xagasha iftiinka. "Midab" ka mid ah cagaarka cagaaran ilaa midab madow.
Cleopatra Begonia uma dulqaadanayo hawo qabow, waana ka fiicantahay in la dhigo qolalka diiran ee qorraxda ku yaal galbeedka ama bariga. Waa suurtogal in dacaayad noocan oo kale ah ee begonia labadaba dhir ahaan iyo habka abuurka.
Wakiilo ka mid ah noocan ah begonias waa weyn, dhirta dhirta leh height leh 60 ilaa 90 cm ee height.
Caleemaha waa weyn, oo leh shinni dhalaalaya. Dhirta caleenta 10-15 cm, width: 5-8 cm Warshad waa mid aad u jilicsan.
Ma taqaanaa? Dhimista Begonia ma jecla inay ku buufiso, waxay u fiicantahay in la nadiifiyo hawada adigoo ku jira weel biyo leh oo ku xiga ubaxa.
Dhuxusha Begonia uma baahna heerkul gaar ah, waxay dareemeysaa heerkulka qolka. Waraabinta waxay noqon kartaa 3 maalmood oo kasta, iyada oo ku xiran hadba sida dhakhsaha ah ee ciidda u engegan. Sababtoo ah "noloshu" way ka fiican tahay doorashada carrada acidic ama waxoogaa yar.
Mason begonia Waa wax aan macquul aheyn in la aqoonsado noocyada kale ee begonias. Dhirta dhirta waxay gaari kartaa ilaa 30 cm, iyo asliga ah oo leh caleen ku koraan ilaa 20 cm. Caleen kasta oo ka mid ah qaabka xabbad ee midabka midab-madow ayaa u muuqda.
Caleemaha waa qallafsan, wadnaha-qaabeeya, fiiqan caarada. Guga iyo xagaaga, ubaxa yaryar ee buraashka ayaa ka muuqda dhirta, taas oo "laab" ku geli karta inflorescence of panicle ah.
Daryeelka loogu talagalay Begonia Mason waa mid fudud, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad si nidaamsan u waraabiso dhirta, ka ilaali naqshadeynta iyo dabacsan carrada. Waxaad dufan kartaa dhirta iyo miraha.
Waa muhiim! Wixii faafinta daaqsinka, waxaad isticmaali kartaa caleemaha caleenta ah ee geedka, waxay sameeyaan shaqo aad u fiican shaqada shaqada.
Codbixinta sirta ah
Begonia Striped hooyo ku nool Koonfurta Ameerika, iyo cimilo-kulaaleed oo leh heerar sare oo qoyaan ah waa dabeecadaha dabiiciga ah ee noocyadaas.
Waxay ku koraan qaab baadiyaha ah. Caleemaha toosan, oo leh tiro badan oo ah xaashiyo. Caleemaha waa lanceolate, ku tilmaamay saldhigga, oo leh xidid toosan dibedda.
Caleen waa midab madow oo cufan, oo leh muraayad buluug ah oo dibedda ah. Prozhilka silver lacag. Dheehnaanta dusha sare waa cufan. Laga soo bilaabo warqadda gudaha waa guduud mugdi ah. Ubaxku waa yar yahay, cadaan iyo casaan.
Tiger Begonia - warshad jilicsan oo qurxoon oo leh caleemo qurxoon oo cajiib ah. Tani waa warshad leh cufan oo caan ah.
Caleemaha waa weyn (ilaa 7 cm dhererka), wadnaha-qaabeeya, calaamad u ah caarada iyo waxoogaa yar beveled. Midabka caleemaha waa saytuun-brownish, oo leh lows cad, taas oo noocyada noocaas ah helay magaceeda.
Warshadani waxay ku nooshahay heerkulka qolka, laakiin xilliga jiilaalka waxaad u baahan tahay inaad "hoos u dhigto shahaadada." Kala duwanaantu ma u dulqaadanayso qorraxda tooska ah.
Waa muhiim! Ha u oggolaanin biyaha inay ku dhacaan caleemaha begonias marka la waraabiyo.
Waraabinta waa inay noqdaan nidaam, laakiin ma aha mid aad u ballaaran si biyuhu aysan u joogsan. Qoyaanka dheeraadka ah ee dheriga, waxaad ku rid kartaa weel biyo, qoyan qoyan ama dhoobo dhoobo leh.
Homeland ee noocyada noocan ah waa goobaha kulaylaha ee Afrika. Kala duwanaanshahan waxaa ku jira noocyo kala duwan oo kala duwan oo kala duwan sida waafaqsan qaabka caleen. Caleemaha ayaa laga yaabaa inay wareegsan yihiin, dad badan, oo wadnaha-qaabeeya. Caleemaha waa kuwo dhalaalaya, cagaaran, daboolan leh dhibco dhalaalaya dusha sare.
Duufaanku waa midab huruud ah-caddaan ah oo ku yaal midabka dabacsan. Caadi ahaan, burooyinkeeda "qaadan" qayb ka mid ah xoogga ka soo geedka, sidaas darteed ilaalinta muuqaalka quruxda badan ee caleemaha, burooyinkeeda si taxadar leh loo gooyaa.
Noocaankan ayaa si fiican ugu koraya meel diiran, oo si fiican u iftiimaya. Warshadda waa in laga ilaaliyaa isbedelka iftiinka iftiinka, xagaaga waa in laga qaadaa muraayadda daaqadda, xilliga qaboobaha - marka lakala saaro, waa in la dhigaa meel dhaw.
Warshadu waa ku dhowaad aqalka dhirta lagu koriyo, sidaa daraadeed lama sameyn karo wadada, xataa xagaaga. Waraabinta waa in ay noqotaa mid joogto ah oo wanaagsan: sababtoo ah biyaha gogolka ah ee caleemaha iyaga ayaa laga yaabaa inay muuqdaan dhibco bunni ah.
Noocaan noocyada noocan ah muddadii u dhaxaysey Maarso ilaa Oktoobar hal mar bishii. Hawadu waa inay ahaato qoyan, laakiin waa inaan lagu qasi karin buufin, iyo xilliga qaboobaha waxaa fiican in dheriga laga saaro battariga.
Tuberiyo barxadda ah
Begonia - mid ka mid ah dhirta ugu caansan guryaha, taas oo laga heli karaa on shelves dukaamada ubax guga. Inta badan, geedo hore loo iibiyay midab.
Tani waa warshad yar oo sannadle ah. Xuduudaha of this begonia waa shinni ah oo hindisay, taas oo iyada helay magaca "tuberous". Geedka asalkiisu waa mid adag, cagaar leh maro casaan leh.
Caleemuhu waa ballaaran yihiin. Buundada waxaa lagu qurxiyey ubaxyo waaweyn oo ah 15 cm dhexroorka, muuqaalka, ubaxa waxay u eg yihiin ubax geedka. oo midabkoodu wuxuu ku kala duwanaan karaa caddaan cad oo casaan ah ilaa casaan dhalaalaya, iyadoo loo marayo dhammaan wareegyada diiran.
Dhirta waa "monoecious", taas oo ah, isla karoosku wuxuu kori karaa ubaxyada "lab" labadoodaba (waa wayn yihiin) iyo "haween" (waa yar yihiin, laakiin midabku waa uu iftiimayaa). Haddii aad si lama filaan ah u rabto wax cuno, waxaad isku dayi kartaa ubaxa of begonia, waa mid la cuni karo.
Ma taqaanaa? Dusha sare ee begonias caleenta wuxuu noqon karaa sida daboolka ah, iyo dhalaalaya!
Marka hubinta daryeelka saxda ah, waa muhiim in la tixgeliyo in ubaxa jecel yahay iftiin, laga ilaaliyo meelaha dabaysha, maxaa yeelay caleemuhu waa kuwo jilicsan oo si sahlan u gudan kara.
Noocyada ugu fiican ee begonias tuberous waxaa badanaa loo isticmaalaa by jilayaal si loo qurxiyo beeraha jiilaalka iyo guryaha, maadaama ay fududahay in ay dacaayin.
Cusbitaalada qaaxada ee badan
Noocaan noocan oo kale ah ayaa matala warshad leh ubaxyo laba jibbaaran ama laba jibbaaran, oo badanaa u muuqda xagaaga bilawga iyo inay dhacaan maalmaha dayrta ee hore. Ubaxa wuxuu noqon karaa midab, cas, casaan ama jaale ah. Kala duwanaantan ayaa iska leh noocyada of begonia weligiis ubax ubax.
Waa muhiim! Noocaan noocan oo kale ah ayaa la buufin karaa toddobaadkii hal mar hawo qallalan.
Si loo soo dhaweeyo noocyada kala duwan waa inay doortaan meelo iftiin leh, laakiin maaha tooska qorraxda. Waraabinta waa in loo sameeyaa sida qallajinta sare u dillaacdo, xagaaga waa ku filan in ay biyo ku cabto toddobaadkii hal mar. Waxaad quudin kartaa marka digriiga iyo inflorescences la sameeyay. Wuxuu jecel yahay ciidda dhoobada ah.
Daryeelka habboon, nooc kasta oo ah curonia wuxuu noqon doonaa quruxda dhabta ah ee gurigaada, muuqaalka qurxinta ee dhirta kulaylaha ayaa kuu xusuusin doona xagaaga.